Umatshini we-ATC wamaplanga we-cnc
Bonisa umzi-mveliso wethu wesibini kuwe iJinan JCUT CNC Equipment Co., Ltd.
IJinan JCUT CNC Equipment Co., Ltd. yasekwa ngo-2006 kwaye ikwiJinan High-tech Industrial Development Zone. Igubungela indawo engaphezulu kwe-26,000 yeemitha zesikwere. Ngomnye welizwe lam elinamandla abanzi abenzi bezixhobo ze-CNC, ezinobuchwephesha obuphambili kunye ne ...
Uyilo olutsha olulebhelisha ngokuzenzekela iileyibheli zomthi wokusika umatshini we-cnc wocango lwekhabhinethi ukwenza isixhobo esizenzekelayo sitshintshe irutha yomthi we-cnc
Uyilo olutsha lwe-ATC Wood CNC Router Machine enomsebenzi wokulebula ngokuzenzekelayo Isicelo: Amashishini eFenitshala: iingcango zekhabhinethi, iingcango zokhuni, iinkuni eziqinileyo, iipleyiti, ifenitshala yakudala, iingcango, iifestile, iidesika kunye nezitulo. Imizi-mveliso yokuhombisa: izikrini, iibhodi zamaza, iintambo ezinkulu ezijingayo eludongeni, iibhodi zentengiso...
Ixabiso elikhulu lesaphulelo kwi-woodworking atc cnc router umatshini wokwenza ifanitshala yocango lwekhabhathi ekhitshini
Isaphulelo esikhulu Ixabiso le-woodworking atc cnc router umatshini womnyango wekhabhinethi ifenitshala yekhitshi yokwenza iSicelo seMveliso * Ifenitshala: iingcango zokhuni, iikhabhinethi, ipleyiti, iofisi kunye neefenitshala zokhuni, iitafile, isihlalo, iingcango kunye neefestile. * Iimveliso zokhuni: ibhokisi yelizwi, iikhabhathi zomdlalo, iitafile zekhompyuter, i-mac yokuthunga ...
Oomatshini bafika kwiplanti yomthengi, kunye nengxelo evela kumthengi, umenzi womatshini we-wood cnc kunye nomthengisi ngaphandle
ngu admin nge 21-03-18
Uxakekile uMatshi. Umthwalo wolwandle uye wabuyela kwisiqhelo ngokuthe ngcembe, kunye nee-odolo ezininzi, kwaye imarike yomatshini wokwenza iinkuni ingenise ixesha elishushu. Oomatshini abaninzi nabo bafikile kumzi-mveliso wabathengi.Masijonge impendulo yabathengi. Sineminyaka eyi-13 ubudala i-wood cnc machi ...
Uyilo olutsha lwe-R8 Isixhobo esizenzekelayo Guqula ikhabhathi yocango lwamaplanga ekwenzeni oomatshini be-cnc
Ukuba ufuna ukuvelisa iingcango zamaplanga, iikhabhathi, iikhabhathi kunye nefenitshala yeephaneli ezahlukeneyo, nceda ufumane malunga nomatshini wethu wokwenza amaplanga we-R8 Auto Tool Change. Lo ngumatshini wethu wamva nje wokusebenza ngamaplanga. Lo matshini usebenzisa uqwalaselo oluphezulu. Eyona nto ibalaselisayo kukuba inesixhobo esingum...
Izixa ezikhulu zoomatshini bokuplanga bathunyelwa ngoDisemba
I-9 ibeka oomatshini bokhuni be-cnc abagqityiweyo kunye nokulayisha kumzi-mveliso wethu Ummeli wethu wayalela iiseti ezili-9 iiseti eziyi-1325 zoomatshini be-cnc, kwaye sasigqibile kwaye silayisha aba matshini kumzi-mveliso wethu. Sineminyaka eyi-12 ubudala umenzi womatshini we-cnc kunye nomthengisi. Oomatshini bethu bathunyelwa kumazwe angaphandle kwilizwe liphela, sinee-post-sal...
Fumana uphononongo oluhle kubathengi
ngu admin on 20-09-07
Fumana uphononongo oluhle kubathengi Umgangatho ophakamileyo bubomi beshishini, itekhnoloji entsha sisiseko seshishini, ukuveliswa kwezinto ezintsha ngundoqo kwinkqubela phambili yeshishini, inkonzo elungileyo emva kokuthengisa iya kuphumelela imakethi ebanzi yenkampani. Inkampani ihlawula ...
Abasebenzi kumzi-mveliso basebenzisa oomatshini ukwenza iisampuli zamalungu angabonakaliyo
Abasebenzi kwifektri basebenzisa umatshini ukwenza iisampulu zeendawo ezingabonakaliyo Umatshini wokusika i-Lamino machining center ngumatshini okhethekileyo osetyenziselwa ukusika kunye ne-grooving ifenitshala eyenziwe ngokwezifiso. Iyakwazi ukulahla imowudi yendabuko yokusika kwaye ithembele kumsebenzi wezandla. Iyakwazi ngokwenene...
Umatshini uyapakishwa kwaye uyathunyelwa
Umatshini uyapakishwa kwaye uthunyelwe Imozulu yanamhlanje ilungile kakhulu, ilanga likhanya, umoya unelanga, kwaye ikwindla icacile. Abathengi abaninzi beza kutyelela umzi-mveliso wethu omnye emva komnye. Abasebenzi kulo mzi-mveliso baxakeke ngumsebenzi wabo kwizithuba zabo. Uyabona, abasebenzi kwi...
Inkampani ngokudibeneyo yatyelela i-Tai'an Rift Valley
ngu admin on 20-08-12
Inkampani ngokudibeneyo yatyelela i-Tai'an Rift Valley Izolo, imozulu yayilungile, inkampani yethu bonke abasebenzi baye bahamba ngeTai an. Ekuseni, satyelela isitiya sebhiya, apho sasisazi ukuba yintoni ibhiya eyenziweyo kunye nendlela eyenziwa ngayo inyathelo ngesinyathelo. Isixhobo esikhulu ...
Iingenelo zomatshini wokusika we-CNC
ngu admin nge 20-04-24
Umatshini wokusika we-CNC, owaziwa ngokuba zizixhobo ezikrelekrele zokuvelisa ifanitshala yefenitshala. Njengoko igama lithetha, zonke iinkqubo ukusuka ekulayisheni, ukusika, ukugrumba umngxuma othe nkqo kunye nokuvala ipleyiti kugqitywe ngexesha elinye. Ithatha indawo ngokugqibeleleyo ukuveliswa kunye nokusebenza ngesandla. Ngoko, zithini...
Ulwazi lokugcinwa komatshini we-JCUT CNC
Ingxaki yemveli yile: 1. Umatshini wokukrola ongazange ugcinwe: isilayidi sikaloliwe sesikhokelo sidliwe kakhulu, isantya somatshini siyacotha, isiphumo somsebenzi asilunganga, ubomi bomatshini bubi, i-axis ye-Z ibambekile, idiagonal. impazamo inkulu, kwaye i-engile yokukhetha ayilungile! UGqr...
R9 uthotho CNC umatshini wokuqhuba R9 uthotho CNC umatshini wokuqhuba: Umatshini esebenzayo ushishino: ukusika slot punch ingasetyenziselwa processing uhlobo ibhodi ifenitshala eshukumayo ukusetyenzwa imodeli ikhabhinethi umnyango closet umnyango iphakheji ethambileyo yokwenene iinkuni ngaphakathi umnyango oqinileyo umthi ifenitshala yekhompyutha. R7 series CNC...
UTHETHWANO SIMAHLA +8618006360664
UTHETHWANO SIMAHLA +8615863173380